Danjire Amiin “Kuwait waxa ay degtay Quluubta Soomaalida”. | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - Danjire Amiin “Kuwait waxa ay degtay Quluubta Soomaalida”.
Danjire Amiin “Kuwait waxa ay degtay Quluubta Soomaalida”.
Kormeeraha guud ee Xarunta Siyaasiyadda iyo Diblumaasiyadda lagu barto Wadanka Kuwait oo la kulmay Safiirada Soomaaliya iyo Senegal ayaa kala hadlay Xaaladda Soomaaliya.
Safiirka Senegal ee Kuwait Abdul-Ahad Mbaki iyo Safiirka Soomaaliya ee Kuwait Dr Cabdulqaadir Shiikh Amiin ayaa inta kulanka uu socday ka sheekeestay Marxaladihii kala duwan Soomaaliya ay soo martay tan iyo bur-burkii.
Wargeyska Al-Anba ee kasoo baxa Wadanka Kuwait ayaa Daabacay in Xiriirka Dowladaha Kuwait iyo Soomaaliya uu yahay mid wanaagsan.
Safiirada Soomaaliya iyo Senegal ee Kuwait ayaa isku raacay in Xukuumadda Kuwait City ay ku amaanan tahay ka qeyb qaadasha samatabixinta dadkii ay saameeyeen Abaarihii is xig-xigay ee Soomaaliya ku dhuftay, iyo taageeridda Dowladda federaalka iyo kaalmooyinka kale.
Safiirka Soomaaliya ee Kuwait Cabdulqaadir Sheekh Amiin ayaa Madaxda Kuwait ugu mahad celiyay doorka wanaagsan ee Soomaaliya la garab taagan yihiin.
Waxa uu Jaaliyadda, Ardayda iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada kunool Kuwait ka dalbaday in ay adkeeyaan doorka walaaltinimo ee ay u muujiyeen Shacabka iyo Madaxda Kuwait.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo qeybta Kuwait u qaabilsan Diiwaan gelinta Madaxda ayuu ugu mahad celiyay Muddada uu xilkaan hayo in ay Casuumeen Shan Xubnood oo Madaxda Sare ee Dowladda ah oo isugu jiray Madaxweynaal iyo Ra’iisul Wasaarayaal, Tobaneeyo Xildhibaano iyo Wasiiro isugu jiray, si ay ugu shaqeeyaan Xiriirka labada Dowladood.
Ugu dambeyn Safiirka Soomaaliya ee Kuwait Cabdulqaadir Shiikh Amiin waxa uu si gaar ah ugu mahad celiyay Hay’adaha Gargaarka ee Kuwait, waxa uu sheegay in ay kasoo dhalaaleen kaalintooda, una gurmadeen dadka gurmadka u baahan.
Inta ay arrintaan ku howlanaayeen waxa uu sheegay in ay gurmad gaarsiiyeen Kumanaan Soomaali ah, adeegyada ay u qabteenna ay kamid yihiin:- Dhismaha Iskuulada, Goobo Caafimaad iyo Masaajid, waxa uuna bogaadiyay in ay sii laba-laabaan.